Vaimbowe Mutungamiri weLybia, VaMoammar Gadaffi Vanourayiwa
Gumiguru 20, 2011
Vaimbova mutungamiri wenyika yeLibya VaMoammor Gadaffi vaurayiwa muguta ravakaberekerwa reSirte. Zvinonzi ndege dzemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weNATO ndidzo dzabhomba motokari dzaVaGadaffi pavange voda kutiza hondo muguta reSirte.
VaGadaffi, avo vaidyidzana zvikuru nemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vainge vagara pachigaro kwemakore mamumi mana nemaviri.
Kunyangwe hazvo vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vainge vagura hukama naVaGadaffi VaMugabe vakaramba vakatsika madziro vachiti VaGadaffi havaifanira kunge vakabviswa pachigaro nechisimba.
Kumusangano weUnited Nations wakaitwa mwedzi wapera muNew York, muno muAmerica, VaMugabe vakashora zvikuru sangano reNATO vachiti sangano iri raisada kusunungura vanhu vemuLibya asi raida zviwanikwa zvenyika iyi.
Vanokokera Zanu PF mudare reparamende VaJoram Gumbo vaudza Studio 7 kuti vanhu vemuAfrica havasi kufara nedanho rekutadza kugadzirisa matambudziko avo voga, vopedzesera vodaidza vekunze, avo vakatourayisa vanhu vakawanda.
Mutauriri weMDC T VaDouglas Mwonzora vatiwo bato ravo ragara zvaro risingafariri kufa kwemunhu, vakati asi ichi chidzidzo kune vatongi vano rambira pachigaro ivo vasisadiwa nevanhu.
Zvichakadaro, shoko rekufa kwevaimbowe mutungamiri weLybia, VaMoammar Gadhafi ratambirwa nenzira dzakasiyana siyana pasi rose, zvikuru muAfrica, umo VaGadaffi vaionekwa semunhu ano remekedzwa kunyange hazvo vamwe vaivaona semudzvanyiriri.
Vamwe vatungamiri vepasi rose vari kutumura mashoko ekukorokotedza hurumende yaka fanobata matomu muLybia nekupfuudza kwayaita VaGadaffi, vachiti ichi chiitiko chichapa nyika iyi mukana wekutanga patsva.
Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica, Amai Hillary Clinton, avo vari kushanya kuAfganstan, vati kunyange hazvo kufa kwaVaGadaffi kuchiita kuti vanhu vambotura befu, havaoni kuchimisa kurwisana muLybia.
Sangano reEuropean Union ratiwo kufa kwaVaGadaffi mucherechedzo wekuguma kwehutongi hweudzvanyiriri.
Mutungamiri wehurumende yeItaly, VaSilvio Berlusconi vatiwo rufu urwu ndiko kupera kwehondo.
MuZimbabwe, nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaJoy Mabenge vatiwo kufa kwaVaGadaffi kwakanganisa chishuvo change chine vanhu vazhinji chekuvaona vachimiswa pamberi pematare edzimhosva vachitongerwa mhosva dzavo.
Asi nhengo yeZanu PF vachimirira Mazowe North muparamende VaCairo Mhandu vati kuurayiwa kwaVaGadaffi nemubatanidzwa weNATO pamwe neNTC chiratidzo chekuti nyika dzekumawirira dzichine chishuwo chekupamba zvakare Africa neupfumi hwayo.
Hurukuro naVaJoy Mabenge pamwe naVaCairo Mhandu